အချစ်၏ အမှောင်ဘက်ခြမ်း (အပိုင်း -၄) - For her Myanmar
ထူးဆန်းစွာပင် ပထမဆုံး ဖုန်းပြောသည့်ညမှာပင် ဧက အိပ်မက်ဆိုးများမမက်ဘဲ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်ခဲ့သည်။
“ဒါက ဟန်နီ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့လက်ဆောင်”
ဧက က စက္ကူလက်ဆောင်ထုပ်ကလေးကို ဟန်နီ့ဘက်သို့ တွန်းရွှေ့လိုက်သည်။ ဟန်နီက ဘာလဲဆိုသောပုံစံနှင့် မျက်လုံးပင့်ပြသည်။ ဧက က “ဖွင့်ကြည့်လေ” ဟုပြောလိုက်သည်။
လက်ဆောင်ထုပ်ကိုဖွင့်နေသော ဟန်နီ့ကိုကြည့်ရင်း ဧက ကြည်နူးမိသလိုခံစားရသည်။ သူ့ဘဝတွင် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို တခုတ်တရ လက်ဆောင်ပေးတာမျိုး မရှိခဲ့။ လူမှုရေးအရပေးရသောလက်ဆောင်များတော့ ရှိဖူးသည်။ ဟန်နီ့ အတွက် ပေးသော လက်ဆောင်ကိုတော့ ဧက ကိုယ်တိုင်အထူးတလည် ရွေးချယ်ဝယ်ယူထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဟန်နီက ကတ်ထူဘူးလေးထဲက စိန်တုံးပုံစံ ပုလင်းချွန်လေးကိုဆွဲထုတ်လိုက်ကာ နမ်းကြည့်နေသည်။
“ရေမွှေးဆိုတာ အဲ့လိုဘူးအပြင်က နမ်းရတာမဟုတ်ဘူး ဆွတ်ကြည့်လေ”
“အဟင်း ဟန်နီက ဘူးကို သဘောကျလို့ပါ”
“ဘူးပဲ မဟုတ်ဘူး၊ အထဲကရေမွှေးကလည်း သဘောကျစရာပဲ ဆွတ်ကြည့်လေ လာဗင်ဒါအနံ့ … ကိုယ်အကြိုက်ဆုံး အနံ့ပဲ”
ဟန်နီက ရေမွှေးကို လက်ကောက်ဝတ်မှာ ဆွတ်လိုက်ပြီး အနံ့မွှေးကြည့်လိုက်သည်။
“အင်း မဆိုးပါဘူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နေ့လယ်စာအတွက်ရော၊ လက်ဆောင်အတွက်ရော”
“ရပါတယ် ဟန်နီ ကိုယ်က အခုထိအားနာနေတုန်းပဲ”
“အားနာစရာမလိုတော့ပါဘူး ဒီရေမွှေးလေးနဲ့ကျေပြီလို့သဘောထားလိုက်ပါ .. ဟန်နီ ဒါကိုအရမ်းသဘောကျပါတယ်”
“အရမ်းသဘောကျတယ်ဆိုလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဟန်နီ.. ဟန်နီနဲ့ကိုယ်နဲ့ပိုရင်းနှီးသွားသလိုခံစားရတယ် ဒီထက်လည်း ပိုပြီး ရင်းနှီးချင်ပါတယ်”
ဧက က ထိုစကားကို အပြုံးအရယ်မရှိဘဲ ဟန်နီ့မျက်နှာကို သေချာကြည့်ပြီး ပြောလိုက်သောကြောင့် ဟန်နီ့ကျောရိုး တစ်လျှောက်စိမ့်ခနဲခံစားလိုက်ရပြီး လက်ဖျားလေးတွေအေးစက်ကာ မွေးညှင်းကလေးများပင် ထောင်သွားသလိုခံစားလိုက် ရသည်။ ဧက၏ မျက်လုံးများကိုဆက်ပြီးရင်မဆိုင်ချင်တော့တာကြောင့် မျက်နှာလွှဲလိုက်ကာ ရေမွှေးဘူးလေးကိုသာ ပွတ်သပ် ကစားနေလိုက်သည်။
အိပ်နေရာကအသက်ရှူကြပ်သောကြောင့် လူးလွန့်ကာ အိပ်ရာခင်းများကို ဆွဲဆုပ်ထားမိသည်။ ရင်ဘတ်ထဲမှာ ကျပ်တည်းစွာ ခံစားရရင်း ချွေးများပင် ရွှဲနစ်လာသည်။ အိပ်မက်လိုလို တကယ့်အဖြစ်အပျက်လိုလိုနှင့် ပုံရိပ်များကို ဧက ခပ်ဝါးဝါး မြင်လာရသည်။ ဧကရှေ့တွင် ကလေးတစ်ယောက်ငိုနေသည်။ လူကြီးနှစ်ယောက် ရန်ဖြစ်နေသည်။ အားကောင်းမောင်းသန် လူတစ်ယောက်က ပိန်ပိန်နွဲ့နွဲ့မိန်းမသားတစ်ယောက်ကို လက်ပြန်လွှဲကာ ရိုက်ချလိုက်သည်။ “အား” ဟု အသံနက်ကြီးနှင့် အော်မိကာ ဧက အိပ်မက်မှ လန့်နိုးလာသည်။
တစ်ကိုယ်လုံး တုန်ယင်ကာ နှလုံးများ တဆတ်ဆတ်ခုန်နေသည်။ အိပ်ရာဘေးစားပွဲပေါ်မှ ရေခွက်ကိုလှမ်းယူလိုက်စဉ် ရေခွက်ကလက်နဲ့တိုက်မိပြီး “ခွမ်း” ကနဲကျကွဲသွားသည်။ ဧက ကုတင်ပေါ်မှဆင်းလိုက်ကာ နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ အချိန်က မနက် ၄နာရီ..
ဆောင်းဝင်ခါစအချိန်ဖြစ်တာမို့ အနည်းငယ်အေးစိမ့်မှုကိုခံစားရသည်။ ဧကသည် ငယ်စဉ် ကတည်းက အေးစက်လှသော ဆောင်းရာသီကိုမုန်းမိသည်။ ထိုဆောင်းရာသီတွင်ပင် အဖေရောအမေကပါ ဧကကိုအပြီးအပိုင် ထားရစ်ခဲ့သည်။ အဖေနှင့်အမေတို့ မရှိသည့်အချိန်မှစ၍ ညစဉ်ညတိုင်း ဧကအိပ်မက်ဆိုးများ မက်တတ်သည်။ သို့သော် ထိုအိပ်မက်မျိုးမမက်ဘဲ နှစ်ခြိုက်စွာအိပ်ခဲ့ရသည်မှာ ၂ လခန့်ရှိနေခဲ့ပြီး အခုညမှပြန်မက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီညမအိပ်ခင် ဟန်နီနှင့် ဖုန်းမပြောမိခဲ့။ ဖုန်းမပြောရခြင်းမှာ ဟန်နီက night scene ရှိနေသောကြောင့် ဧက က ပြောချင်လျက်နှင့် မပြောလိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ဟန်နီ့ကို ရေမွှေးလက်ဆောင်ပေးပြီးသည့်နေ့မှစ၍ ညစဉ်ညတိုင်း ဟန်နီနှင့် ဖုန်းပြောဖြစ်သည်။ ထူးဆန်းစွာပင် ပထမဆုံး ဖုန်းပြောသည့်ညမှာပင် ဧက အိပ်မက်ဆိုးများမမက်ဘဲ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ပင် ဧကရဲ့ဟန်နီ့အပေါ်ရစ်တွယ်မှုများက ပို၍ခိုင်မာခဲ့သည်။ အိပ်မက်ဆိုးကြောင့် ဟန်နီ့ကိုပိုပြီး သတိရသလိုဖြစ်ကာ ဟန်နီ့ဖုန်းကို ခေါ်ကြည့်လိုက်သည်။ သုံး လေး ခါလောက်မြည်နေပြီးမှ…
“ဟန်နီ ကိုယ် အခု ဟန်နီ့ကိုတွေ့ချင်တယ် ဟန်နီဘယ်မှာလဲ”
“ဟန်နီအခုလေးတင် အိမ်ပြန်ရောက်တာ မနက်မှတွေ့မယ်လေ”
“ကိုယ်အခုဟန်နီနဲ့တွေ့ရမှဖြစ်မယ် ဟန်နီမပြောရင် ကိုယ် တခြားသူတွေကို ဖုန်းဆက်ပြီး လိုက်မေးမှာနော်”
“အဲ့လိုတော့ လိုက်မမေးပါနဲ့ ပြောမယ် ဟန်နီ့အိမ်က ….”
ဧကဖုန်းကိုချလိုက်ပြီးတာနှင့် ကားသော့ကိုယူကာ ကားပါကင်ကိုဆင်းလာခဲ့သည်။ ဒီအချိန်ဟန်နီ့ကိုမတွေ့ရလျှင် သူ့စိတ်မငြိမ်မှုများ ပျောက်ကင်းနိုင်မည်မဟုတ်။
ကားဟွန်းသံနှစ်ချက်လောက်ဆက်တိုက်ကြားသော်လည်း ဟန်နီအိပ်ရာထဲက မထမိ။ စားပွဲပေါ်မှဖုန်းမြည်လာမှ အိပ်ချင်မူးတူးဖြင့်ထကာ ကောက်ကိုင်ကြည့်လိုက်တော့ ဧက ဖြစ်နေသည်။
“ဟန်နီ ကိုယ်အိမ်ရှေ့ရောက်နေပြီ ထွက်လာခဲ့နော်”
“ဟင် တကယ်ကြီးလား နေဦးနော် လာမယ်”
ဟန်နီသည် ရှုပ်ပွနေသောဆံပင်ကိုလက်ဖြင့်အနည်းငယ်သပ်ချကာ ညဝတ်အင်္ကျီကို ကြည့်ကောင်းအောင် ဆွဲဆန့်ပြီး အောက်ထပ်သို့ပြေးဆင်းခဲ့သည်။ ဟန်နီပြန်မရောက်မချင်း မအိပ်ဘဲစောင့်နေသောမာမီက အခုတော့ နှစ်ခြိုက်စွာအိပ်ပျော် နေပြီဖြစ်သောကြောင့်သာ တော်တော့သည်။ မဟုတ်ရင် စစ်ဆေးရေးအဝင်ခံနေရဦးမည်။ မနက် ၅ နာရီထိုးခါနီးဖြစ်သော ကြောင့် ကောင်းကင်က တိမ်ဖြူ တိမ်ညိုများဖြင့် ယှက်ထွေးနေသည်။ ဟန်နီခြံတံခါးကိုအပြေးဖွင့်လိုက်သည်။
ဧကသည် ဟန်နီထဲကထွက်လာသည်ကို ကားပေါ်ကထိုင်ကြည့်နေမိသည်။ ဟန်နီ့ကိုမြင်လိုက်ရသည်နှင့် သူ့စိတ်ထဲ မှာပြောမပြတတ်အောင်ကို နွေးထွေးသလိုခံစားရသည်။ ဟန်နီ့ရဲ့ ဂရုတစိုက်ပြောတတ်သောစကားလေးများကြောင့်လည်း သူ့နှလုံးခုန်သံများ ပူနွေးလာတတ်သည်။ သေချာပါသည်။ ဟန်နီသာ မရှိလျှင် သူ့ဘဝအဓိပ္ပာယ်မဲ့သွားတော့မည်။ ဟန်နီ့ကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရလျှင် သူသေသွားနိုင်သည်။ ဧကသည် ကားတံခါးကိုဖွင့်ဆင်းလိုက်သည်။ ဟန်နီက ခြံတံခါးကိုတွန်း ဖွင့်ကာထွက်လာရင်း…
ဟန်နီ့စကားမဆုံးလိုက်ခင် ဧက က ဟန်နီ့ကိုယ်လေးကိုတင်းကြပ်စွာဖက်ထားလိုက်သည်။ ဟန်နီသည် အံ့သြမှု တုန်လှုပ်မှု ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုများစုပေါင်းကာ ဘာမှဆက်မပြောနိုင်ဘဲ ဖြစ်နေသည်။ ဧက က တင်းကြပ်သထက် ပိုတင်းကြပ်အောင် တိုးဖက်လိုက်တော့မှ ဟန်နီသတိဝင်လာသည်။ အသက်ရှုလို့မဝ ဖြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့် ဟန်နီ့လက်များဖြင့် ဧကရဲ့ ကိုယ်ကို ကြိုးစားပြီး တွန်းဖယ်လိုက်သည်။
“ဟန်နီ အသက်ရှူလို့ မရဘူး”
“ဆောရီး ဟန်နီ… ကိုယ်ဟန်နီ့ကို အရမ်းသတိရလို့ပါ…”
“မနက်အစောကြီး အိမ်ရှေ့ကို လာတာ အဲ့ဒါပြောဖို့လား? ဟန်နီက အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စများရှိသလားလို့”
“သြော် အင်း ပြောလေ”
“ကိုယ် ဟန်နီ့ကိုချစ်တယ်…ဘယ်ကတည်းကလဲ..ဘာကြောင့်လဲဆိုတာတွေလည်းမမေးပါနဲ့.. အဲ့ဒါတွေအတွက် ကိုယ့်မှာအဖြေမရှိဘူး… ဒီလိုမနက်စောစော ဟန်နီ့ကို သတိရလွန်းလို့ ပြေးလာခဲ့တာနဲ့တင် ကိုယ်ဟန်နီ့ကို ချစ်တယ်ဆိုတာ ယုံပေးပါ စဉ်းစားပါရစေလို့တော့ မပြောပါနဲ့ တကယ်တော့ စဉ်းစားတယ်ဆိုတာ ဦးနှောက်ကို သုံးပြီးရွေးချယ်တာလေ ကိုယ်က ဟန်နီ့ရဲ့နှလုံးသားထဲကနေ စစ်မှန်တဲ့ ခံစားမှုနဲ့ရွေးချယ်တာကိုလိုချင်တာ ဟန်နီ့စိတ်ထဲမှာ ကိုယ့်ကို ကြည်ဖြူတယ် မကြည်ဖြူ ဘူးဆိုတာ စဉ်းစားစရာမလိုအောင် ရှင်းလင်းတဲ့ အဖြေရှိပြီးသားလို့ ကိုယ်ခံစားမိတယ် ဟုတ်ရဲ့လား”
ဟန်နီသည် ဧက၏ စကားအရှည်ကြီးကို နားထောင်ပြီးနောက် ခေါင်းညိတ်ရမလို ခေါင်းခါရမလို ဘာလုပ်လို့လုပ်ရမှန်း မသိအောင်ဖြစ်နေရပြီး ဧက ကိုသာ အကြာကြီး စိုက်ကြည့်နေမိသည်။ ဧက၏ နက်ရှိုင်းသောမျက်ဝန်းများ၏ ဆွဲငင်ခြင်းကို ခံရပြီးနောက် ခေါင်းညိတ်မိလိုက်သလား မသိ။ ဧက က “ဝမ်းသာလိုက်တာ ဟန်နီရယ်” ဟုတဖွဖွပြောရင်း ဟန်နီ့ကို နောက်ထပ် တစ်ကြိမ် ပွေ့ဖက်ထားလိုက်တော့သည်။
ထူးဆနျးစှာပငျ ပထမဆုံး ဖုနျးပွောသညျ့ညမှာပငျ ဧက အိပျမကျဆိုးမြားမမကျဘဲ နှဈခွိုကျစှာ အိပျပြျောခဲ့သညျ။
“ဒါက ဟနျနီ့အတှကျ ကိုယျ့ရဲ့လကျဆောငျ”
ဧက က စက်ကူလကျဆောငျထုပျကလေးကို ဟနျနီ့ဘကျသို့ တှနျးရှလေို့ကျသညျ။ ဟနျနီက ဘာလဲဆိုသောပုံစံနှငျ့ မကျြလုံးပငျ့ပွသညျ။ ဧက က “ဖှငျ့ကွညျ့လေ” ဟုပွောလိုကျသညျ။
လကျဆောငျထုပျကိုဖှငျ့နသေော ဟနျနီ့ကိုကွညျ့ရငျး ဧက ကွညျနူးမိသလိုခံစားရသညျ။ သူ့ဘဝတှငျ တဈစုံတဈယောကျကို တခုတျတရ လကျဆောငျပေးတာမြိုး မရှိခဲ့။ လူမှုရေးအရပေးရသောလကျဆောငျမြားတော့ ရှိဖူးသညျ။ ဟနျနီ့ အတှကျ ပေးသော လကျဆောငျကိုတော့ ဧက ကိုယျတိုငျအထူးတလညျ ရှေးခယျြဝယျယူထားခွငျးဖွဈသညျ။
ဟနျနီက ကတျထူဘူးလေးထဲက စိနျတုံးပုံစံ ပုလငျးခြှနျလေးကိုဆှဲထုတျလိုကျကာ နမျးကွညျ့နသေညျ။
“ရမှေေးဆိုတာ အဲ့လိုဘူးအပွငျက နမျးရတာမဟုတျဘူး ဆှတျကွညျ့လေ”
“အဟငျး ဟနျနီက ဘူးကို သဘောကလြို့ပါ”
“ဘူးပဲ မဟုတျဘူး၊ အထဲကရမှေေးကလညျး သဘောကစြရာပဲ ဆှတျကွညျ့လေ လာဗငျဒါအနံ့ … ကိုယျအကွိုကျဆုံး အနံ့ပဲ”
ဟနျနီက ရမှေေးကို လကျကောကျဝတျမှာ ဆှတျလိုကျပွီး အနံ့မှေးကွညျ့လိုကျသညျ။
“အငျး မဆိုးပါဘူး ကြေးဇူးတငျပါတယျ နလေ့ယျစာအတှကျရော၊ လကျဆောငျအတှကျရော”
“ရပါတယျ ဟနျနီ ကိုယျက အခုထိအားနာနတေုနျးပဲ”
“အားနာစရာမလိုတော့ပါဘူး ဒီရမှေေးလေးနဲ့ကပြွေီလို့သဘောထားလိုကျပါ .. ဟနျနီ ဒါကိုအရမျးသဘောကပြါတယျ”
“အရမျးသဘောကတြယျဆိုလို့ကြေးဇူးတငျပါတယျ ဟနျနီ.. ဟနျနီနဲ့ကိုယျနဲ့ပိုရငျးနှီးသှားသလိုခံစားရတယျ ဒီထကျလညျး ပိုပွီး ရငျးနှီးခငျြပါတယျ”
ဧက က ထိုစကားကို အပွုံးအရယျမရှိဘဲ ဟနျနီ့မကျြနှာကို သခြောကွညျ့ပွီး ပွောလိုကျသောကွောငျ့ ဟနျနီ့ကြောရိုး တဈလြှောကျစိမျ့ခနဲခံစားလိုကျရပွီး လကျဖြားလေးတှအေေးစကျကာ မှေးညှငျးကလေးမြားပငျ ထောငျသှားသလိုခံစားလိုကျ ရသညျ။ ဧက၏ မကျြလုံးမြားကိုဆကျပွီးရငျမဆိုငျခငျြတော့တာကွောငျ့ မကျြနှာလှဲလိုကျကာ ရမှေေးဘူးလေးကိုသာ ပှတျသပျ ကစားနလေိုကျသညျ။
အိပျနရောကအသကျရှူကွပျသောကွောငျ့ လူးလှနျ့ကာ အိပျရာခငျးမြားကို ဆှဲဆုပျထားမိသညျ။ ရငျဘတျထဲမှာ ကပျြတညျးစှာ ခံစားရရငျး ခြှေးမြားပငျ ရှဲနဈလာသညျ။ အိပျမကျလိုလို တကယျ့အဖွဈအပကျြလိုလိုနှငျ့ ပုံရိပျမြားကို ဧက ခပျဝါးဝါး မွငျလာရသညျ။ ဧကရှတှေ့ငျ ကလေးတဈယောကျငိုနသေညျ။ လူကွီးနှဈယောကျ ရနျဖွဈနသေညျ။ အားကောငျးမောငျးသနျ လူတဈယောကျက ပိနျပိနျနှဲ့နှဲ့မိနျးမသားတဈယောကျကို လကျပွနျလှဲကာ ရိုကျခလြိုကျသညျ။ “အား” ဟု အသံနကျကွီးနှငျ့ အျောမိကာ ဧက အိပျမကျမှ လနျ့နိုးလာသညျ။
တဈကိုယျလုံး တုနျယငျကာ နှလုံးမြား တဆတျဆတျခုနျနသေညျ။ အိပျရာဘေးစားပှဲပျေါမှ ရခှေကျကိုလှမျးယူလိုကျစဉျ ရခှေကျကလကျနဲ့တိုကျမိပွီး “ခှမျး” ကနဲကကြှဲသှားသညျ။ ဧက ကုတငျပျေါမှဆငျးလိုကျကာ နာရီကိုကွညျ့လိုကျတော့ အခြိနျက မနကျ ၄နာရီ..
ဆောငျးဝငျခါစအခြိနျဖွဈတာမို့ အနညျးငယျအေးစိမျ့မှုကိုခံစားရသညျ။ ဧကသညျ ငယျစဉျ ကတညျးက အေးစကျလှသော ဆောငျးရာသီကိုမုနျးမိသညျ။ ထိုဆောငျးရာသီတှငျပငျ အဖရေောအမကေပါ ဧကကိုအပွီးအပိုငျ ထားရဈခဲ့သညျ။ အဖနှေငျ့အမတေို့ မရှိသညျ့အခြိနျမှစ၍ ညစဉျညတိုငျး ဧကအိပျမကျဆိုးမြား မကျတတျသညျ။ သို့သျော ထိုအိပျမကျမြိုးမမကျဘဲ နှဈခွိုကျစှာအိပျခဲ့ရသညျမှာ ၂ လခနျ့ရှိနခေဲ့ပွီး အခုညမှပွနျမကျခွငျးဖွဈသညျ။
ဒီညမအိပျခငျ ဟနျနီနှငျ့ ဖုနျးမပွောမိခဲ့။ ဖုနျးမပွောရခွငျးမှာ ဟနျနီက night scene ရှိနသေောကွောငျ့ ဧက က ပွောခငျြလကျြနှငျ့ မပွောလိုကျရခွငျးဖွဈသညျ။ ဟနျနီ့ကို ရမှေေးလကျဆောငျပေးပွီးသညျ့နမှေ့စ၍ ညစဉျညတိုငျး ဟနျနီနှငျ့ ဖုနျးပွောဖွဈသညျ။ ထူးဆနျးစှာပငျ ပထမဆုံး ဖုနျးပွောသညျ့ညမှာပငျ ဧက အိပျမကျဆိုးမြားမမကျဘဲ နှဈခွိုကျစှာ အိပျပြျောခဲ့သညျ။ ထို့ကွောငျ့ပငျ ဧကရဲ့ဟနျနီ့အပျေါရဈတှယျမှုမြားက ပို၍ခိုငျမာခဲ့သညျ။ အိပျမကျဆိုးကွောငျ့ ဟနျနီ့ကိုပိုပွီး သတိရသလိုဖွဈကာ ဟနျနီ့ဖုနျးကို ချေါကွညျ့လိုကျသညျ။ သုံး လေး ခါလောကျမွညျနပွေီးမှ…
“ဟနျနီ ကိုယျ အခု ဟနျနီ့ကိုတှခေ့ငျြတယျ ဟနျနီဘယျမှာလဲ”
“ဟနျနီအခုလေးတငျ အိမျပွနျရောကျတာ မနကျမှတှမေ့ယျလေ”
“ကိုယျအခုဟနျနီနဲ့တှရေ့မှဖွဈမယျ ဟနျနီမပွောရငျ ကိုယျ တခွားသူတှကေို ဖုနျးဆကျပွီး လိုကျမေးမှာနျော”
“အဲ့လိုတော့ လိုကျမမေးပါနဲ့ ပွောမယျ ဟနျနီ့အိမျက ….”
ဧကဖုနျးကိုခလြိုကျပွီးတာနှငျ့ ကားသော့ကိုယူကာ ကားပါကငျကိုဆငျးလာခဲ့သညျ။ ဒီအခြိနျဟနျနီ့ကိုမတှရေ့လြှငျ သူ့စိတျမငွိမျမှုမြား ပြောကျကငျးနိုငျမညျမဟုတျ။
ကားဟှနျးသံနှဈခကျြလောကျဆကျတိုကျကွားသျောလညျး ဟနျနီအိပျရာထဲက မထမိ။ စားပှဲပျေါမှဖုနျးမွညျလာမှ အိပျခငျြမူးတူးဖွငျ့ထကာ ကောကျကိုငျကွညျ့လိုကျတော့ ဧက ဖွဈနသေညျ။
“ဟနျနီ ကိုယျအိမျရှရေ့ောကျနပွေီ ထှကျလာခဲ့နျော”
“ဟငျ တကယျကွီးလား နဦေးနျော လာမယျ”
ဟနျနီသညျ ရှုပျပှနသေောဆံပငျကိုလကျဖွငျ့အနညျးငယျသပျခကြာ ညဝတျအင်ျကြီကို ကွညျ့ကောငျးအောငျ ဆှဲဆနျ့ပွီး အောကျထပျသို့ပွေးဆငျးခဲ့သညျ။ ဟနျနီပွနျမရောကျမခငျြး မအိပျဘဲစောငျ့နသေောမာမီက အခုတော့ နှဈခွိုကျစှာအိပျပြျော နပွေီဖွဈသောကွောငျ့သာ တျောတော့သညျ။ မဟုတျရငျ စဈဆေးရေးအဝငျခံနရေဦးမညျ။ မနကျ ၅ နာရီထိုးခါနီးဖွဈသော ကွောငျ့ ကောငျးကငျက တိမျဖွူ တိမျညိုမြားဖွငျ့ ယှကျထှေးနသေညျ။ ဟနျနီခွံတံခါးကိုအပွေးဖှငျ့လိုကျသညျ။
ဧကသညျ ဟနျနီထဲကထှကျလာသညျကို ကားပျေါကထိုငျကွညျ့နမေိသညျ။ ဟနျနီ့ကိုမွငျလိုကျရသညျနှငျ့ သူ့စိတျထဲ မှာပွောမပွတတျအောငျကို နှေးထှေးသလိုခံစားရသညျ။ ဟနျနီ့ရဲ့ ဂရုတစိုကျပွောတတျသောစကားလေးမြားကွောငျ့လညျး သူ့နှလုံးခုနျသံမြား ပူနှေးလာတတျသညျ။ သခြောပါသညျ။ ဟနျနီသာ မရှိလြှငျ သူ့ဘဝအဓိပ်ပာယျမဲ့သှားတော့မညျ။ ဟနျနီ့ကို လကျလှတျဆုံးရှုံးလိုကျရလြှငျ သူသသှေားနိုငျသညျ။ ဧကသညျ ကားတံခါးကိုဖှငျ့ဆငျးလိုကျသညျ။ ဟနျနီက ခွံတံခါးကိုတှနျး ဖှငျ့ကာထှကျလာရငျး…
ဟနျနီ့စကားမဆုံးလိုကျခငျ ဧက က ဟနျနီ့ကိုယျလေးကိုတငျးကွပျစှာဖကျထားလိုကျသညျ။ ဟနျနီသညျ အံ့သွမှု တုနျလှုပျမှု ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားမှုမြားစုပေါငျးကာ ဘာမှဆကျမပွောနိုငျဘဲ ဖွဈနသေညျ။ ဧက က တငျးကွပျသထကျ ပိုတငျးကွပျအောငျ တိုးဖကျလိုကျတော့မှ ဟနျနီသတိဝငျလာသညျ။ အသကျရှုလို့မဝ ဖွဈလာသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ဟနျနီ့လကျမြားဖွငျ့ ဧကရဲ့ ကိုယျကို ကွိုးစားပွီး တှနျးဖယျလိုကျသညျ။
“ဟနျနီ အသကျရှူလို့ မရဘူး”
“ဆောရီး ဟနျနီ… ကိုယျဟနျနီ့ကို အရမျးသတိရလို့ပါ…”
“မနကျအစောကွီး အိမျရှကေို့ လာတာ အဲ့ဒါပွောဖို့လား? ဟနျနီက အရမျးအရေးကွီးတဲ့ ကိစ်စမြားရှိသလားလို့”
“သွျော အငျး ပွောလေ”
“ကိုယျ ဟနျနီ့ကိုခဈြတယျ…ဘယျကတညျးကလဲ..ဘာကွောငျ့လဲဆိုတာတှလေညျးမမေးပါနဲ့.. အဲ့ဒါတှအေတှကျ ကိုယျ့မှာအဖွမေရှိဘူး… ဒီလိုမနကျစောစော ဟနျနီ့ကို သတိရလှနျးလို့ ပွေးလာခဲ့တာနဲ့တငျ ကိုယျဟနျနီ့ကို ခဈြတယျဆိုတာ ယုံပေးပါ စဉျးစားပါရစလေို့တော့ မပွောပါနဲ့ တကယျတော့ စဉျးစားတယျဆိုတာ ဦးနှောကျကို သုံးပွီးရှေးခယျြတာလေ ကိုယျက ဟနျနီ့ရဲ့နှလုံးသားထဲကနေ စဈမှနျတဲ့ ခံစားမှုနဲ့ရှေးခယျြတာကိုလိုခငျြတာ ဟနျနီ့စိတျထဲမှာ ကိုယျ့ကို ကွညျဖွူတယျ မကွညျဖွူ ဘူးဆိုတာ စဉျးစားစရာမလိုအောငျ ရှငျးလငျးတဲ့ အဖွရှေိပွီးသားလို့ ကိုယျခံစားမိတယျ ဟုတျရဲ့လား”
ဟနျနီသညျ ဧက၏ စကားအရှညျကွီးကို နားထောငျပွီးနောကျ ခေါငျးညိတျရမလို ခေါငျးခါရမလို ဘာလုပျလို့လုပျရမှနျး မသိအောငျဖွဈနရေပွီး ဧက ကိုသာ အကွာကွီး စိုကျကွညျ့နမေိသညျ။ ဧက၏ နကျရှိုငျးသောမကျြဝနျးမြား၏ ဆှဲငငျခွငျးကို ခံရပွီးနောကျ ခေါငျးညိတျမိလိုကျသလား မသိ။ ဧက က “ဝမျးသာလိုကျတာ ဟနျနီရယျ” ဟုတဖှဖှပွောရငျး ဟနျနီ့ကို နောကျထပျ တဈကွိမျ ပှဖေ့ကျထားလိုကျတော့သညျ။
Tags: Fiction Series, Fun, Interval, love, Past, psychology, Story